Otu nke kasị mma rụzuru nke Apple Inc bụ egbe nke iMovie omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe video edezi software na ga-ekwe ka ha nweta ihe kasị mma na mkpokọta oké atụmatụ agbakwunyere n'ime otu usoro ihe omume. Ụfọdụ ọrụ Otú ọ dị achọghị na-emefu ego online na maka otu ihe ahụ ha na-achọ free ọzọ. A nkuzi bụ ihe niile banyere ihe omume na dị online n'efu na onye ọrụ nwere ike iji ha enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu mgbe ọ na-abịa iMovie zụọ.
Ụfọdụ na-agaghị emeli
The ọrụ na-adịghị nnọọ ụtọ nke iMovie dị ka ọ nwere ọtụtụ na-agaghị emeli na imeri ya uru na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na free ọzọ bụ chọọ iji jide n'aka na ihe kasị mma na nke Steti nke nkà omume na-eji jide n'aka na ihe ga-esi dị na akara na ihe ndị a chọrọ. Ụfọdụ n'ime eru nke iMovie na-kwuru dị ka ndị a na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ịchọ ọzọ na-agaghị emeli mgbe ahụ internet bụ ihe niile oghe maka ha iji jide n'aka na zuo a mere mgbe zuru ezu nnyocha.
Otu usoro bụ ga-eji na-eke a oru ngo dị ka ọ na-apụghị òkè na ndị ọzọ na usoro na maka otu ihe ahụ otu ugboro nkiri na-exported mgbe ahụ, ọ bụ nile na ihe ọ bụla nwere ike mere ugbu a.
The mmegharị n'ime iMovie dị nnọọ mwute na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị mmezi jikoro iji jide n'aka na ihe nkiri na-dezie n'ụzọ ziri ezi ma na akara na ihe ndị a chọrọ nke onye ọrụ.
The interface nke usoro ihe omume bụghị ọrụ enyi na enyi na niile na maka otu ihe ahụ na-amụta iMovie bụ a na-akụda ọrụ na nke a.
The ogologo iMovie oru ngo na-ewe oge dị ukwuu na-exported na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ọrụ kwesịrị ichere ruo nnọọ ogologo oge na-eme ka n'aka na needful a mere, nkiri na-exported na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike na-ele ya .
The n'ozuzu onu-akwado iMovie na-adịghị kwalite na ọhụrụ releases na-ada gaa n'ihu na-eji otu agadi nkà na ụzụ na bụ maa bụghị ezigbo ihe ịrịba ama ma ọlị.
E wezụga ndị a na-agaghị emeli ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe kasị mma na anya nke nkà mmemme a na-eme iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na mkpokọta competencies na-ụba na enyemaka nke free omume na a ga-kwuru na na-esote akụkụ nke nkuzi. Ọ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọzọ na iMovie na-kposara maka ndị na-adịghị amasị ya mgbe niile na-eme ka ha nwee obi ụtọ na afọ ojuju.
Top 5 free iMovie uzo ozo maka PC
Iji mee ka n'aka na ahụmahụ nke iMovie na-enwe ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ uzo ozo na-atụle na nke a:
Video LAN nkiri Onye Okike
Rụbichiri na mgbidi Studio
The omume na-mepụtara site na mebere dub nzukọ na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà omume nke oge a oge. Ọ na-na--ahụ kwuru na Mmepe na-mara ha egwu usoro na mkpokọta professionalism na nke a. The omume na-free na-emeghe isi koodu dere.
The linear arụmọrụ ndị a ga-rụrụ na nke a bụ ndị na-ga-ekwe ka onye ọrụ jide n'aka na arụmọrụ zuru oke na-enwe.
The ogbe nhazi ike ndị kasị mma iji hụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ esichara.
Ọ na-akwado ọ bụla format si AVI ka MPEG ya mere ọ dị otu nke kasị mma na ahịa.
Usoro ihe omume nwere ike ibudata site www.virtualdub.org.
Adobe teknụzụ maa ọ dịghị mkpa iwebata dị ka ọ bụ onye nke kasị mma na nke kasị mma otu nke mmepe na-abịa na egwu na ọkaibe omume na iri gara aga. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ ibudatara na ukara njikọ iji jide n'aka na ihe kasị mma e ụtọ na arụnyere.
The interface nakwa dị ka n'ozuzu anya nke usoro ihe omume bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ma na-eji usoro ihe omume na ala.
The nhazi bụ a otutu ihe ngwa ngwa ka tụnyere rivals na nke a na maka otu ihe ahụ ọ bụ ihe kasị Mmanu usoro.
Usoro ihe omume nwere ike ibudata site Pinnaclesys.
3. Video LAN nkiri Onye Okike
Ọzọ nke video LAN nzukọ mara maka e kere eke nke VLC ọkpụkpọ ọ dịghị mkpa iwebata. Usoro ihe omume nke dị n'okpuru ụka na-ahụ na onye ọrụ na-akawanye ike nke video nakwa dị ka oyiyi edezi na afọ ojuju. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara na akara na ntụziaka,
ọ dị mfe interface nke usoro ihe omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na ikwu na nhazi.
N'adịghị ka rivals usoro ihe omume na-eme ka n'aka na n'ozuzu ọsọ na-nọgidere na-enwe ka otu ebe site ná mmalite ruo ọgwụgwụ.
Ọ bụ free ibudata na-emeghe iyi.
Nbudata URL bụ Pịa m.
4. rụbichiri na mgbidi Studio
Usoro ihe omume e mepụtara site rụbichiri na mgbidi Systems na mmepe ebe a na-na-mara maka kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ ga na-ahụ na onye ọrụ na-mgbe pacified na ngwaahịa na-kere dị ka ihe atụ ndị kasị mma na ala nke nkà.
The n'ozuzu arụmọrụ nke usoro ihe omume bụ maa otu nke kasị mma na ọ na-eme n'aka na onye ọrụ na-pacified na bụla o kwere omume n'ụzọ.
Nhazi gbapụrụ ọsọ dị nnọọ nnọọ ukwuu dị ka tụnyere ndị ọzọ na ndepụta.
24/7/365 nkwado bụ n'ebe iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results nke a.
Isi Iyi forge bụ Mmepe nke a classy mpempe omume na ọ na-eme n'aka na ihe oyiyi nakwa dị ka video mkpachapụ bụ ihe kasị mma na ndị kasị elu mmemme na-mere-eji nke a free na-emeghe iyi usoro. The otu nke mmepe na n'oge gara aga nakwa na gbagote na egwu omume na-eme ka ndụ mfe.
Usoro ihe omume dị mfe ịghọta na ịwụnye. Ozugbo ọ e arụnyere na nkuzi nke na-abịa tinyere bụkwa na-agụ.
The n'ozuzu arụmọrụ nke usoro ihe omume na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na okwu nke ogbe nhazi.
Ị nwere ike Download Jahashaka inwe a-agbalị.
> Resource> iMovie> Top 5 free iMovie ọzọ maka PC